Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Billaha Ahaa ee Jaaliyada Norway oo Guul Kusoo Dhamaaday.
Shirkii Billaha Ahaa ee Jaaliyada Norway oo Guul Kusoo Dhamaaday.
Sida uu Wariyaha ONA u jooga caasimada wadanka Norway ee Oslo waxaa guul kusoo dhamaday shirkii billaha ahaa ee Jaaliyada Soomalida Ogadeniya wadanka Norway kasoo oo lagu lafa guray arimo badan oo muhiim u ah geedi socodka hawlaha Halganka Ogadenya.
Ugu horayn shirka waxaa lagu furay aayado Quraanka Kariimka kamid ah waxaana akhriyay Sheekh Cabdinasir ilahay haka ajir & xasanaad haka siiyee.
Wuxuu shir daadihiyuhu kusoo dhaweeyay cod-baahiyaha Gudoomiyaha Jaaliyada Soomaalida Ogadeniya ee Norway Mudane Khalif Abdi Ali oo si faah faahsan uga warbixiyay hawlaha ay qabatay jaaliyadu iyo qorshayasha u qorshaysan xiliyada soo socda aadna xubnihii shirka kasoo qayb galay way ula dhaceen warbixintaas uu Gudoomiyuhu lawadaagay.
Waxaa xusid mudan in shirkan uu marti sharaf u ahaa Lataliyaha Gudoomiyaha JWXO Gen. Abdulahi Mukhtar oo ujeeddada safarkiisu ahayd inuu jaaliyada Soomalida Ogadeniya ee Norway la wadaago ama u gudbiyo go,aamadii ay Gudiga Fulinta JWXO kasoo sareen shirkii bishan 10 keedi ka dhacay magaalada Stocholm ee caasimada wadanka Sweden..
General Abduli mukhtar ayaa si waafi ah ugu warbixiyay arimhii lagaga wada hadlay shirkaas iyo go,aamadii la qaatay. Wuxuu kaloo masuulku sharaxay arimo badan oo khuseeya qadiyada xaqa ah ee Soomalida Ogadeniya…
Waxaa kaloo shirka ka hadashay Halganto Sahra Abdulahi oo kamid ahayd Aas-aaskii Jaaliyada Soomalida Ogadeniya ee dalka Norway. Waxayna halkaas kasoo jeedisay hadal qiimo badan oo guubaabo u ah dhamaan xubnaha iyo inta xaqa jecel.
Sidoo kale waxaa hadal qiimo badan jeediyay Xaaji Maxamed Yusuf oo kawar bixiyay marxalada uu gumaysigu kujira iyo isbadalka hada kasocda Itoobiya, taasoo uu si wayn u sharxay in gumaysiga Itoobiya hada uu quus taaganyahay.
Dhamaan Masuuliintii shirkan kahadashay waxay u rajeeyeen shacabka Soomalida Ogadeniya guul iyo xoriyad iyo inay adkaysi iyo sabir layimaadaan, isla markaana siina labajibaran tageerada halganka xaqa ah ee JWXO hormuudka u tahay. waxaa kaloo ay masuuliyintu kula taliyeen walalaha Soomaliyeed inay iyagu danahooda u istagaan ,, qorshayaasha shisheeyana meel iska dhigaan..